Liverpool oo Fariin gaaban u dirtay Tottenham ka hor kulankooda Final ka Champions League – Gool FM
(England) 09 Maajo 2019. Kooxaha reer England ee Liverpool iyo Tottenham ayaa si mucjiso ah ugu soo gudbay Final ka Champions League kaddib markii ay guulo soo laabasho leh ka soo kala gaareen Barcelona iyo Tottenham.
Reds ayaa habeen hore 4-0 uga soo adkaatay Barcelona xilli lugtii hore ee sami final ka looga soo adkaaday 3-0.
Spurs oo iyana 1-0 looga soo adkaaday lugtii hore ee lagu soo ciyaaray mininkeeda ayaa misane labo gool lagu marsiyay qeybta hore ee kulankii xalay ka dhacay Holland.
Yeelkeede, laacibka reer Brazil ee Lucas Moura ayaa saddexleey ka kacay taa oo u suuro galisay in Tottenham ay markii ugu horreysay soo hiigsato kulanka kama dambeysta ee tartanka ugu xiisaha badan Yurub.
Liverpool ayaa barteeda Twitter ka fariin gaaban ugu reebtay Tottenham ka hor kulankooda Finalka ee 1-da Juun.
“Madrid ayaan kugu arki doonaa,@SpursOfficial.”
Labada kooxood ayaa ku ciyaari doona magaalada Madrid gaar ahaan garoonka ay dhawaan dhisatay kooxda Atletico Madrid ee Estadio Wanda Metropolitano.